မောင်းတောက သေနတ်သံတွေ မရပ်သေးဘူးလား??? – Sunthit Myanmar
မောင်းတောက သေနတ်သံတွေ မရပ်သေးဘူးလား???
မြန်မာနိုင်ငံ နောက်ဖက်နယ်စပ် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မောင်းတောမြို့မှာ ARSA အကြမ်းဖက်များနဲ့ တိုက်ပွဲများပျင်းထန်ခဲ့တာဟာ သြဂုတ်လ၂၅ရက်နေ့မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး မောင်းတောမြို့နယ်အတွင်း ARSA လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေ မရှိတော့ဘူးဟု မြန်မာ့တပ်မတော်မှပြောကြား၍ စစ်ကြောင်းများကိုပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် နိုဝင်ဘာလဆမ်းတွင် မသင်္ကာဖွယ် အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဒေသခံများကတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ၎င်းအဖွဲ့ဟာ စုစုပေါင်း ၈ဦးပါဝင်ပြီး ၆ယောက်မှာ သေနတ်ကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ကျန် ၂ဦးကတော့ ဓားရှည်တွေကိုလွယ်၍ ဂေါ်ဒူသာရ မူဆလင်ကျေးရွာမှ ထွက်လာကာ ရွှေဗဟိုကျေးရွာနှင့် ကင်းချောင်းကျေးရွာကြားမှ မေယုတောင်ထဲကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ချိန်တွင် တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ကင်းချောင်းကျေးရွာရှိ ရွာသားတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတွင် ယခင်က ARSA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ ခိုအောင်းနေထိုင်သွားခဲ့သော လှိုင်ဂူတွေတည်ရှိရာ မောင်းတော တောင်ပိုင်း ကင်းချောင်းရွာ အရှေ့ဘက် တစ်မိုင်ခန့်အကွာကနေ သေနတ်ပစ်ခတ်သံကို ကြားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတစ်ဦး၏ပြောပြချက်အရ သိရပါတယ်။
အထပ်ပါ မသင်္ကာဖွယ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုမှ လိုက်လံရှင်းထုတ်ရာမှ ထိုသေနတ်သံတွေ ပြန်ကြားလာရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဟု ရွာသားတစ်ဦးကပြောပါတယ်။ ၃လနည်းပါး တည်ငြိမ်နေပြီးဖြစ်တဲ့ မောင်းတောဟာ ယခုတစ်ဖန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြန်လည်တွေ့ရှိရပြီး ပစ်ခတ်အသံတွေပါပြန်လည် ထွက်ပေါ်လာရသဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများမှာ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ ပြန်လည်အသက်ရှင်သန်နေရပါတယ်။
Published November 12, 2017 By waihtun
Categorized as News Tagged ေမာင္းေတာက ေသနတ္သံေတြ မရပ္ေသးဘူးလား???
ပွေ့ဖက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲ?